“QOLODADI WAX QARXIN JIRTAYNA WAXABAY WADAAN EE KA DIGTOONADA” A.Y.YASIIN | Toggaherer's Weblog
Sheekh 20 March 2009 (THN)
Madawxweyne-ku-xigeenka Somaliland Md. Axmed Yuusuf Yaasiin, ayaa shacbiga uga digay in ay ka digtoonaadaan kooxaha argagixisada wax qarxiya oo uu sheegay in beryahan dambe si weyn loo hadal-hayey.
Md. Axmed Yuusuf Yaasiin ayaa hadalka kaga dhawaaqay shir shalay ka dhacay magaalada Sheekh oo ay isugu yimaaddeen raxan ka tirsan wasiirrada xukuumadda, xildhibaanno, madaxda xisbul-xaakimka talada haya boqollaal qof oo ka mid ah taageerayaasha xisbiga UDUB.
Madaxweyne-ku-xigeenku waxa uu dadweynaha u diray farriin ah inay ka foojignaadaan wax uu ugu yeedhay arbushka iyo kicinta la wado, isla markaana adkeystaan nabadooda iyo deganaashahooda, “Qoladii aragagixisada ahayd ee wax qarxin jirtayna waxbay wadaan ayaa la sheegayaa ee halaga digtoonaado.”
Madaxweyne-ku-xigeenka oo ka hadlayey shirka Sheekh oo dareenno shaki laga muujiyey, waxa uu yidhi; “Horta waxaan halka ka caddeynayaa in aan shirkani ahayn mid beeleed ee uu yahay mid ay xisbiga UDUB iyo bahweynta taageerayaashiisu isugu yimaaddeen oo baytarigii lagu siraadayo. Halkan [Sheekh] shirkii Tawfiiq1992-kii ayaa ugu dambaysay, shirkana waa Tawfiiq 2 oo isfaham iyo is-afgarasho ayaa ka dhacday, sidaa awgeedna waxaan bulshada ugu baaqayaa inay ka foojignaadaan abaabulka ay wadaan kooxihii wax qarxin jiray.”
“Ilaa marxuum Cigaal ayaa la lahaa koonfur baa lagu socdaa iyo cidbaa wax lala galay, haseyeeshee arrimahaas oo dhan waa kuwo dadka lagu jaahwareerinayo oo dano laga leeyahay. Marxuum Cigaal ayaa mar uu Golaha Wakiillada u yimi wuxuu yidhi, ‘anigu Somaliland waxaan u imi inaan ku aargoosto 12kii sanno ee aan xidhnaa, go’aankana 160 xildhibaan ayaa ku darista koonfur gaadhi kara,” ayuu yidhi Md. Axmed Yuusuf Yaasiin.
Madaxweyne-ku-xigeenku oo ka hadlayey arrimaha doorashooyinka, waxa uu carrabka ku dhuftay in saddexda xisbi ku heshiiyeen in diiwaangelin la sameeyo, doorashada Madaxtooyadana la soo hormariyo, “Markaa miyey dhici kartaa nin labaatan kaadh haysta iyo nin kaadh haysta inay wada codeeyaan? Haddaba, si loo helo doorasho xor oo xalaal ah ayaa mishiinka Severku kala saarayaa dadka ku noqnoqday. Sidaa darteed, xisbiyada waxa keliya oo aan leeyahay ka ummaddu codkooda siiso ayaa dalka u talinaya.”
Waxa kale oo Madaxweyne-ku-xigeenku ganafka ku dhuftay doodda axsaabta mucaaradka ah ee ku saabsan in labada gole Baarlamaan soo dhisaan xukuumad ku-meel-gaadh ah oo dalka doorasho gaadhsiisa, waxaannu xusay in markii wakhtigii Guurtidu dhammaaday aan la odhan cid kale haloo dhiibo ee loo kordhiyay, “Haddii Wakiillada wakhtigoodu dhaafo oo doorashana qabsoomi waydo waxa la odhanayaa iyagu ha sii wadeen, sidaas awgeed ayaa Madaxweynaha iyo Ku-xigeenkana ay u beddeli karaan kuwo la doortay.”
“Waxaannu diyaar u nahay in la qabto doorasho xor iyo oo xalaal ah, haseyeeshee ninka bil samri kari la’a waa nin dadka dab gelinaya, waxaannu xisbiga UDUB u soo jeedinayaa mucaaradka in cayda iyo aflagaaduba ka reebban tahay tartanka.”
Shirkan oo u muuqday mid si weyn loo soo abuubulay oo lagu qabtay cusbitaalka degmada Sheekh, ayaa waxa kale oo ka hadlay wasiirrada Duulista, Arrimaha Dibadda, Wasiiru-dawlayaasha Dibadda, Daakhiliga, Xoghayaha Guud ee UDUB, salaadiin cuqaal, xildhibaanno iyo xubno kale.
Geesta kale, sida wabaahinta qaar laga baahiyey , waxa maalmihii u dambeeyey si wayn loo hadal-hayay shir beeleed Madaxwayne-ku-xigeenka iyo xubno wasiiro ah oo xukuumadda ka tirsan qabanqaabinayeen oo la filay inuu shalay ka furmo degmada Sheekh ee Gobolka Saaxil.
Haseyeeshee shirkaas ayaa isu beddelay xaflad kooban oo Madaxwayne-ku-xigeenku u qabtay taageerayaal xisbiga UDUB ah oo ka kala yimi magaalooyinka Burco, Berbera iyo Hargeysa, iyadoo madasha lagu wareejiyay ciidamo koofiyad cas ah oo aad u tiro badan, waxana habeen hore ilaa shalay subax halkaa ku sugnaa ciidammada miino-baadhista oo goobtaas ka baadhay miinooyin iyo waxyaabaha kale ee qarxa.
Md. Axmed Yuusuf Yaasiin oo horkacaya 7 wasiir oo ka tirsan xukuumadda Madaxwayne Rayaale, ayaa shalay subax gaadhay degmada Sheekh, halkaas oo la filayey inuu ka furo shir-beeleed uu dhawaan ku baaqay, abaabulkiisuna muddo ka socday Gobolka Saaxil, balse markii dambe isu beddelay shir UDUB-aysan.
Baashe Cabdillaahi Yaasiin oo ka mid ah dadwaynaha ku dhaqan degmada Sheekh oo u waramay warbaahinta , ayaa sheegay in dadwayne ka soo horjeeda shirka Madaxwayne-ku-xigeenka ku dhaqaaqeen isu soo bax ay ku muujiyeen taageeradooda xisbiga mucaaridka ah ee KULMIYE oo sitay calanka xisbiga iyo hal-ku-dhigyo ay ku muujinayaan taageeradooda, kuwaas oo markii dambe isugu tagay xarunta xisbiga KULMIYE ee Degmada Sheekh.
Dadwaynaha isu soo baxa sameeyey, ayaa waxa xarunta KULMIYE kala hadlay Guddoomiyaha Sheekh ee xisbiga iyo qaar ka mid ah odayaasha waaweyn ee degmadaas oo ay ka mid yihiin Caaqil Aadan Yuusuf Xuseen iyo Caaqil Axmed Maxamed Ilbir.
Faraxaan Yuusuf Ismaaciil